नेपालमा गैरकानूनी मानिएको क्रिप्टोकरेन्सी के हो ? – Milappost
नेपालमा गैरकानूनी मानिएको क्रिप्टोकरेन्सी के हो ?
मिलाप पोस्टमङ्गलबार, ०२ मङि्सर, २०७७
क्रिप्टोकरेन्सी एक विश्वव्यापी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली हो । अनलाइनबाट पैसाजस्तै संकेत हुने भर्चुअल पैसा नै क्रिप्टोकरेन्सी हो । यो भौतिकरूपमा देख्न नसकिए पनि अनलाइनको माध्यमबाट व्यक्ति व्यक्तिबीच किनबेच हुन्छ । यस्तो भर्चुअल कारोबार हुने क्रिप्टो करेन्सीका डिजिटल प्ल्याटफर्म विश्वमा हजारौंको संख्यामा छन् ।
बिटक्वाइन, इथेरेम, टिथर, एक्सआरपी, बिटक्वाइन क्यास जस्ता सैयौँ क्रिप्टोकरेन्सीहरु प्रचलनमा छन् । हाल विश्वमा ११०० भन्दा बढी यस्ता क्रिप्टेकरेन्सी प्रचलनमा छन् ।
ओपन सोर्स सफ्टवेरको रूपमा ‘सातोसी नाकामोतो’ नाममा सन् २००९ मा इन्टरनेटमा विटक्वाइनको प्रयोग सुरु भएको हो । नेपालमा यसको प्रयोग सन् २०१३ तिर शुरु भएको बुझिन्छ । सन् २००९ मा १० सेन्टमा सुरु भएको विटक्वाइनको कारोबार हाल ४३९३ डलर सम्म पुगेको छ ।
क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा कुनै बैंक वा मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता पर्दैन । कारोबार गर्ने व्यक्तिहरुको पहिचान खुलाउन पनि जरुरी हुँदैन ।यसको कारोबारमा कुनै सेवा शुल्क नलाग्ने, प्रयोगकर्ताको पहिचान नखुल्ने र करको दायराभित्र पनि नपर्ने देखिन्छ ।
यसको कारोबार केही देशमा खुला भए पनि विश्वका धेरै जसो देशमा प्रतिबन्धित छ । नेपालका साथै बंगलादेश, चीन, बोलिभिया, रुस, भियतनाम लगायतका देशमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गैरकानूनी मानिएको छ ।
Posted in अर्थ/बाणिज्य
आइपिओ बिक्री आजदेखि खुला
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि प्रतिलिटर २–२ रुपैयाँ बढे
खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटरमा २० देखि २५ रुपियाँ घटे
अधिकतम १ लाख सम्मको छुट